Momba anay - BAOTE INDUSTRIAL MANUFACTURING CO., LTD
GROUP indostrialy BAOTEmiorina ao amin'ny "saikinosy" tsara tarehy any Qingdao City of China dia orinasa vaovao sy ha-tech izay mandova ny fomban-drazana sy mikatsaka fanavaozana. Ny BAOTE Group dia manana sampana telo izay mifantoka amin'ny tsipika fandraharahana samihafa.
Voalohany ny vokatra vy--- Ny karazan-baoritra mahazatra sy tsy manara-penitra, voanjo, mpanasa fisaka, visy ary tavy vy, fitoeran-javatra vy izay eo amin'ny sehatry ny BAOTE Industrial Manufacturing Co. LTD
Faharoa dia kitapo plastika--- Ny karazana kitapo rehetra, kitapo fanasana paompy beton, kitapo fanesorana asbestos, kitapo lehibe pp; Vokarin'ny plastika True Leader.
Ny fahatelo dia Qingdao Rainbow Tech Co., Ltd, izay milina fantsom-boaloboka Precast Concrete sy mpamatsy milina plastika. Ny vokatra dia misy ny milina fanaovana fantsom-pamokarana Concrete amin'ny taona 2005 ary namokatra soa aman-tsara ny milina fantsom-panafody radial vertika voalohany tamin'ny taona 2012. Ny tsipika Prestressed Concrete Cylinder Pipe (PCCP) koa dia eo amin'ny sehatra.
Tongasoa eto hitsidika ny orinasa ary hanorina fifandraisana maharitra miaraka aminao.
Hanaja ny mpanjifantsika amin'ny serivisy tsara indrindra, ny vidin'ny mifaninana ary ny kalitaon'ny stable.
Kolontsaina ifotoran'ny orinasa
Vina amin'ny orinasa: hamelombelona ny indostram-pirenena ary hanangana marika fanta-daza iraisam-pirenena.
Asa fitoriana: Omeo ireo mpampiasa rafitra rafitra sy fifehezana kabinetra elektrika tonga lafatra indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Sanda ara-orinasa: hahatratrarana ny mpanjifa, hamoronana lanja ary hanisy famirapiratan'izao tontolo izao.
Fomban'ny orinasa: firindrana, tsy fivadihana, fahombiazana ary fanavaozana.
1. Paikadin'ny orinasa: fanavaozana ny teknolojia, fanatsarana ny tsena, famokarana be pitsiny ary fitantanana siantifika.
Fitsipika momba ny asa: ny toetra voalohany, ny fahaiza-manao faharoa.
Filôzôfia momba ny fitantanana: mifantoka amin'ny olona, ​​manaraka ny fitsipika.
Filôzôfia amin'ny tsena: Tsy misy tsena tsy azo idirana, ary tsy misy mpanjifa tsy azo ampitaina.
Ny orinasa dia mijery mandrakariva ny fampiasam-bola amin'ny haitao sy talenta, mijery akaiky ny filan'ny mpanjifa, ary manome antoka ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao amin'ny tanjaka ara-teknika matanjaka. Ireo tondro rehetra amin'ny vokatra novokarina dia mahafeno na mihoatra ny fepetra takiana amin'ny motera lehibe ary nandalo ny fenitra nasionaly mifandraika amin'izany. Ny fanombatombanana matihanina sy ny fanekena ny sampana manam-pahefana dia nahazo laza tsara teo amin'ny tsena anatiny sy ivelany.
Ny orinasa dia mino ny fitsipiky ny "mpanjifa aloha, mifantoka amin'ny kalitao", miaraka amin'ny politikan'ny kalitaon'ny "fandresena amin'ny kalitao, ny fiezahana ho tonga lafatra", ary ny fandaminana ny famokarana sy ny asa mifanaraka amin'ny fenitry ny rafitra fitantanana kalitaon'ny indostria sy ny lalàna nasionaly mifandraika amin'izany ary fitsipika. Serivisy haverina amin'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina.
Bolt firafitra, Lag Bolts, Bolts amin'ny kalesy, Masinina Sodina Pipe, U Bolts, Hex Bolts,